Ismaaciil C. Geele "Ciidamo dheeraad ah baan usoo dirayna Soomaaliya" | KEYDMEDIA ONLINE
Ismaaciil C. Geele “Ciidamo dheeraad ah baan usoo dirayna Soomaaliya”
Nairobi (KON) - Dowladda Jabuuti ayaa shaacisay inay ciidammo dheeraad ah oo qayb ka noqda Howllgalka AMISOM, u dirayso Soomaaliya bilahaan soo socda.
Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele ayaa sheegay in Ciidamo dheeraad ah oo ku biira Ciidamada haatan ka jooga Soomaaliya oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Geele oo la kulmay Wafdi ka socda Golaha Ammaanka Midowga Afrika oo Jabuuti booqasho ku jooga ayaa sheegay in Jabuuti ay ka shaqeyneyso Nabadeynta Gobollada ay Gacanta ku hayaan Ciidamada AMISOM iyo Dowladda Federaalka.
Ciidamadaan iyo Saraakiil tababara Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa kamid noqon doona Howllgalka AMISOM.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dhamaadkii Sanadkii 2013 sheegtay in ay bilowga Sanadka 2014 sii kordhinaysa Ciidanka ka jooga Soomaaliya.
"Sanadkii 2006-da ilaa Maanta Al-shabaab Dagaal ayay ku jireen, mana ahan kuwo doonaya dowladnimo, nabad iyo xasilooni (...) sidaa daraadeed qorshahayagu waa in laga adkaado,’’ ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle.
Ciidamada Jabuuti ka socda ee qeybta ka ah AMISOM ayaa waxa ay Hormuud ka yihiin Howgallo Military oo Al shabaab looga saarayo Gobolka Hiiraan.